Ukubuka ulwandle kunye nezitepsi zokuya esantini - I-Airbnb
Ukubuka ulwandle kunye nezitepsi zokuya esantini
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguNomad Hospitality
UNomad Hospitality yi-Superhost
Hlala nathi kule flethi okanye indlu ekwicomplex elwandle ekwindawo entle eJax Beach. Umgama wokuhamba ukuya kwidolophu yaseJax kunye nemoto emfutshane ukuya embindini wedolophu yaseNeptune Beach. Zombini ezi ndawo zineevenkile zokutyela ezintle, iikhefi, iivenkile kunye nobomi obuninzi basebusuku. Le ndlu ilungiselelwe ngumcebi wasekuhlaleni.
Kufuphi nezolonwabo, iMayo neTPC - le yeyona ndawo intle eJax Bch!
Le ndlu yindawo ekumgangatho ophantsi
Amagumbi okulala ayi-2 neebhafu eziyi-2
-Ikhitshi elipheleleyo, igumbi lokuhlala, kunye negumbi lokutyela
-Umatshini wokomisa impahla
Onke amagumbi okulala anomatrasi we-memory foam, izinto zebhedi zobunewunewu, iiTV ze-Roku, kunye noomatshini bokukhulisa isandi kunye ne-usb connecters.
Ikhitshi linayo yonke into oyidingayo ukuze upheke isidlo kunye nomatshini wokwenza ikofu weKeurig oquka ii-kcups, kunye neswekile.
Kukho indlela yokungena esetyenziswa nangabanye abantu kumgangatho ongasentla. Kukho nendawo yokupaka esimahla esesitratweni.
Siyaqinisekisa ukuba yonke into oyifunayo iyafumaneka ukuze kube mnandi ukuhlala kuyo. I-Roku TV kunye neNetflix, i-Amazon Prime kunye ne-Xfinity stream (amajelo ayi-150nangaphezulu), iitawuli ezisemgangathweni kunye namashiti, kunye nekofu kunye neti.
I-wifi ekhawulezayo esuka ku-Xfinity
Ipropathi ibekwe kwibhloko ukusuka elunxwemeni kwaye kumgama wokuhamba ukuya kwiindawo zokutyela zasekhaya kunye ne-Jacksonville Beach pier. Siyayithanda le ndawo yaseJacksonville Beach ngenxa yokuba kufutshane nolwandle kunye nokuba kufutshane neendawo zokutyela, imivalo, ukuzonwabisa, njl.
Umbuki zindwendwe ngu- Nomad Hospitality
Izimvo eziyi-1 741
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Jacksonville Beach